कल @ + 91-993.702.7574 भुबनेश्वर मा 15 seater टेम्पो यात्री मूल्य हाम्रो 25 थाहा
भुवनेश्वरमा तपाईंको गन्तब्यमा एक परेशानी मुक्त सवारी खोज्दै हुनुहुन्छ? बालुवा पसलहरू'एक अस्थायी यात्री मूल्य भुवनेश्वर मा मूल्य निस्सन्देह सर्वोत्तम छ। तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको सेवा सहरमा उत्तम छ। टेम्पो ट्राभर्सर भाडामा यदि तपाईं हुनुहुन्छ भने यात्रा गर्ने एक राम्रो तरिका हो एक समूहमा यात्रा गर्दै। एसी टेम्पू ट्रैवलर छोटो / लामो दूरी यात्रा वा कुनै अन्य भ्रमणका लागि आदर्श ठूलो सवारी हुन सक्छ। रेत पिब्बल्स 'भुवनेश्वर मा सर्वश्रेष्ठ टेम्पो यात्री मूल्य को पेशकश गर्छन। हामी टाटा Winger 15, 17, 19, 21 seaters सहित भाडामा टेम्पो यात्री को एक किसिम प्रस्ताव। हाम्रो टीमले तपाईंलाई कुनै पनि परेशानी बिना तपाईंको उत्तम यात्रा योजना गर्न मद्दत गर्नेछ। हाम्रो ड्राइभरहरू गहिरो ज्ञान छ, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको यात्रा सजिलै संग चल्छ। Bhubaneshwar मा टेम्पो यात्री मूल्य को जाँच गर्नुहोस हाम्रो सेवा को एक झलक। हामी ग्राहकहरु को संतुष्टि मा धेरै सोच र प्रयास राखयो ताकि उनि एक आरामदायक र आराम को यात्रा गर्न सक्छन्।
पहिलो पटक ओडिशालाई भेट्न? वा बुकमार्क गर्ने बुकिङ दिन हो? यदि तपाइँ एक समूहमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले 25 सेटर टेम्पो ट्राभर्सर भर्ना गर्नुपर्छ। ओडिशा मा धेरै देख्न को लागी, टेम्पा ट्रैवर्सर को भर्ती को सबै भन्दा राम्रो र सबै को देखने को लागि सबै भन्दा राम्रो तरीका हो। यात्राको क्रममा, तपाईंको सुरक्षा र आरामको आश्वासन पाउनुहोस्, किनकि सबै गाडीहरू भाडा गर्नुअघि सबै राम्रो तरिकाले जाँच गरिन्छ।
24 घण्टा सेवा- हामी हाम्रो सबै क्लाइन्टहरूमा 24-घन्टा सेवा प्रदान गर्दछौं, बिना विलम्ब। हामी भुवनेश्वर मा एक सर्वश्रेष्ठ टेम्पो ट्रैवलर मध्ये एक हो, हाम्रो ग्राहकहरु को गुणवत्ता को गुणवत्ता प्रदान गर्दछ।
गुणवत्ता- हामी सधैं हाम्रो ग्राहकहरु लाई अत्यन्त सन्तुष्टि संग सेवा गर्न समर्पित छौं। हाम्रो सबै Tempos5तारा दर्जा दिइएको छ। हामी भारत मा एकमात्र यात्री परिवहन कम्पनी एक ग्राहक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार संग यूरोपीय संघ को गुणवत्ता प्रबंधन को माध्यम ले हो।
चालक प्रशिक्षण र सुरक्षा- हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि हाम्रो ड्राइभरले क्लाइन्ट सर्भर गर्नु भन्दा उचित प्रशिक्षण र आकलन गर्न सक्दछ। हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि हाम्रा चालकहरूसँग आपातकालीन खतराहरूको लागि प्रथम-सहायता प्रशिक्षण छ। प्रत्येक प्रान्त हाम्रो परिसर छोड्न अघि निरीक्षण गरिएको छ।